मध्यपश्चिममा भ्रष्ट्रचारको अवस्था ? (जंगबहादुर डागीसँगको कुराकानी)
देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था व्यापक बन्दै गइरेहेको छ । भष्ट्राचारको बारेमा अनुसन्धान गर्ने अख्तियार दुर्रुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख समेत भ्रष्ट भएको भन्दै महाअभियोगको प्रस्ताव समेत दर्ता गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा मध्यपश्चिमाञ्चल विकमा क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ ? र कार्यालयमा भ्रष्टाचारका उजुरी कत्तिको आउने गर्छन् ? लगायतका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय कार्यालय सुर्खेतका निमित्त प्रमुख जंगबहादुर डांगीसँग जागरणकर्मी करिश्मा चौधरीले कुराकानी गर्नुभएको छ ।
देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था व्यापक बन्दै गइरेहेको छ । भष्ट्राचारको बारेमा अनुसन्धान गर्ने अख्तियार दुर्रुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख समेत भ्रष्ट भएको भन्दै महाअभियोगको प्रस्ताव समेत दर्ता गरिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा मध्यपश्चिमाञ्चल विकमा क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ ? र कार्यालयमा भ्रष्टाचारका उजुरी कत्तिको आउने गर्छन् ? लगायतका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय कार्यालय सुर्खेतका निमित्त प्रमुख जंगबहादुर डांगीसँग जागरणकर्मी करिश्मा चौधरीले कुराकानी गर्नुभएको छ ।
प्रस्तोता ः मध्यपश्चिममा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ ?
अतिथि ः मध्यपश्चिममा हामीले ९ जिल्ला हेर्छौ । कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्ला राप्ती अञ्चलको रुकुम र भेरी अञ्चलको सुर्खेत, जाजरकोट र दैलैख जिल्लामा हेरीरहेका छौँ । यसमा हामीसंग उजुरीहरु चार सय ४३ वटा मध्य हामीले एक सय ११ वटा फरस्युट गरेर ३३२ वटा उजुरीमा अनुसन्धान तहकीकात गरिरहेका छौँ ।
प्रस्तोता ः दुई वर्षभन्दा पहिला र अहिले भ्रष्टाचारको उजुरी पर्ने दर कस्तो छ ?
अतिथि ः उजुरी पर्ने दर एकदमै घटेको छ । २०७० असोज १ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रिय कार्यालय सुर्खेतमा स्थापना भएपछि, सुरुदेखी ३७ सय ३४ उजुरी कार्यालयमा परे । त्यसमा हामीले अनुसन्धान तहकीकात ग¥यो र ३२ सय ६९ वटा फरस्युट ग¥यौं ।
आर्थिक वर्ष २०७३– ०७४ मा हेर्दा साउनमा ८२, भदौमा २९, असोज २६, कात्तीकमा २३ र मंसिरमा १९ वटा उजुरी आएको छ ।
प्रस्तोता ः कुन क्षेत्रको उजुरी बढी आउँछ ?
अतिथि ः अहिले सम्म शिक्षा क्षेत्रको उजुरी धेरै छ । शिक्षामा एक सय ४९ वटा उजुरी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । धेरै उजुरी पर्ने निकायमा दोस्रोमा संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय, तेस्रोमा वन, चौँथोमा सहरी र पाँचौमा उर्जा छ ।
प्रस्तोता ः नौ जिल्ला मध्य कुन जिल्लाको उजुरी बढी आउँछ ?
अतिथि ः कालिकोटको उजुरी बढी छ । अहिले कालीकोटको ७२ वटा उजुरी छन् । दोस्रोमा सुर्खेत छ । सुर्खेतको ६१ उजुरी छ । जाजरकोटको ५७ वटा उजुरी छ । सबैभन्दा कम डोल्पामा १३ वटा उजुरी छ ।
प्रस्तोता ः उजुरी गर्ने दर घटेको छ भन्दा भ्रष्टाचार घटेको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ?
अतिथि ः सामान्यतया त्यो बुझ्न सकिन्छ । उजुरी कम पर्दैमा भ्रष्टाचार कम भयो भन्ने एउटा आधार हुन सक्छ तर त्यो सत्य होईन ।
प्रस्तोता ःअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमै भएकाले यसले सुर्खेतका उजुरीलाई प्रथमिकतामा राखेर हेर्छ ?
अतिथि ः हामीले समानान्तर रुपले हेर्छौ । उजुरीको प्रकृति के छ र उजुरीको विषय हेरेर हामीले समानान्तर रुपमा उजुरी हेर्ने गर्छौ ।
प्रस्तोता ः अख्तियारले सामान्य किसिमका भ्रष्टाचार मात्र हेर्छ ठुला भ्रष्टाचार हेर्दैन भन्ने आरोप छ नी ?
अतिथि ः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ब्यक्ति कुन पदको थियो भनेर हेर्दैन । भ्रष्टाचार गर्दा उक्त ब्यक्तिको कसुर मात्र हेरिन्छ । ब्यक्तिको पद गौण हुन्छ ।